Edemede Lorraine Ball na Martech Zone |
Edemede site na Bọọlụ Lorraine
Facebook, LinkedIn na Twitter niile agbadoro onyinye mgbasa ozi ha. Ndi obere ulo ahia na-awuputa na otu mgbasa ozi mgbasa ozi? Nke ahụ bụ otu n'ime isiokwu anyị nyochara na afọ a ịntanetị nyocha nyocha.
Otu ugboro n'afọ m na-agbaji bọọlụ ochie kristal ma kesaa amụma ahịa ole na ole na ọnọdụ m chere ga-adị mkpa maka obere azụmaahịa. N'afọ gara aga, eburu m amụma ịrị elu na mgbasa ozi mmekọrịta, ọrụ gbasaawanye nke ọdịnaya dị ka ngwá ọrụ SEO yana eziokwu ahụ bụ na ịzigharị ozi mkpanaka agakwaghị abụ nhọrọ. Nwere ike ịgụ amụma ahịa 2015 m niile ma hụ etu m siri nọrọ. Mgbe ahụ gụkwuo
Naanị mgbe ị chere na ị nwere njikwa na ịre ahịa ịntanetị a, ihe ọhụụ ọhụụ. Ugbu a, Inbound Marketing na-eme ngagharị. Onye ọ bụla na-ekwu maka ya, mana gịnị ka ọ bụ, olee otu ị si amalite, kedụ ngwaọrụ ị chọrọ? Inbound marketing na-amalite site na ozi efu, enyere site na ntanetị mmekọrịta, ọchụchọ, ma ọ bụ mgbasa ozi akwụ ụgwọ. Ebumnuche bụ ịkpalite ọchịchọ nke atụmanya ma mee ka ha gbanwere ha
Monday, December 31, 2012 Monday, December 31, 2012 Bọọlụ Lorraine
Afọ iri gara aga, nhọrọ ịzụ ahịa maka ndị nwere obere azụmaahịa pere mpe. Omenala mgbasa ozi dịka redio, Tv na ọbụlagodi mgbasa ozi kachasị dị oke ọnụ maka obere azụmaahịa. Mgbe ahụ ịntanetị bịara. Email ahịa, mgbasa ozi mmekọrịta, blọọgụ na okwu mgbasa ozi na-enye obere ndị nwe ụlọ ahịa ohere ịkọwa ozi ha. Na mberede, ị nwere ike ịmepụta echiche ahụ, ụlọ ọrụ gị buru ibu karịa site na enyemaka nke nnukwu weebụsaịtị yana mmekọrịta siri ike
Afọ iri isii gara aga ka telivishọn na-apụta n'ebe ahụ, mgbasa ozi TV yiri mgbasa ozi redio. Ihe ndị mejupụtara ha bụ isi onye na-ese ihe n'ihu igwefoto, na-akọwa ngwaahịa, dị nnọọ ka ọ ga-esi na redio. Naanị ihe dị iche bụ na ị ga - ahụ ya ka ọ na - ejide ngwaahịa a. Dika TV toro, otu a ka mgbasa ozi si bia. Dika ndi na ere ahia muta ike nke ihe nlere anya ha meputara mgbasa ozi itinye aka na mmetụta uche, ufodu di ochi, ndi ozo